Ny haben'ny andriamanitra tsy manam-petra - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-01 > Ny fahafenoan'Andriamanitra tsy manam-petra
Ahoana no ahafahan'ny olona miaina ny fiainan'ny kristiana eto amin'ity tontolo ity? Tiako ny hisintona ny sainao amin'ny fizarana vavaka izay nivavahan'ny iray amin'ireo mpanompon'Andriamanitra lehibe indrindra, dia ny Apôstôly Paoly, ho an'ny fiangonana kely any amin'ny toerana iray antsoina hoe Efesosy.
Efraosy lehibe sy manankarena ao Azia Minor i Efesosy ary foiben'ny andriamanibavin'i Diana sy ny fiankohofana aminy. Noho izany antony izany, i Efesosy dia toerana tena sarotra ho an'ny mpanara-dia an'i Jesosy. Ny vavany kanto sy manandratra ho an'io fiangonana kely io, voahodidin'ny fanompoana mpanompo sampy, dia voasoratra ao amin'ny taratasy ho an'ny Efesiana izany. «Ny fivavahako dia ny hivelomana ao aminao Kristy amin'ny finoana. Tokony hamaka tsara amin'ny fitiavany ianao. tokony hanangana azy ireo ianao. Satria amin'ny fomba toy izany ihany no hahafahanao mahatsapa ny halehiben'ny fitiavany amin'ny kristiana rehetra. Eny, mangataka aho mba hahatakaranao bebe kokoa hatrany io fitiavana io, izay tsy ho takatry ny saintsika tanteraka mihitsy. Amin'izay dia ho feno bebe kokoa ianao amin'ny harena be rehetra izay miaina miaraka amin'Andriamanitra » (Efesiana 3,17: 19 dia manantena ny rehetra).
Andeha hodinihintsika ny haben'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ireo tarika samihafa: Voalohany ny halavan'ny fitiavana an'Andriamanitra - tsy misy fetrany! «Noho izany, afaka mamonjy mandrakizay izy, aminny alalany (Jesosy) manatona an'Andriamanitra; satria velona mandrakizay izy ary mangataka aminy » (Hebreo 7,25).
Manaraka, aseho ny fatra-pitiavan'Andriamanitra: «Ary izy tenany (Jesosy) no fampihavanana noho ny fahotantsika, tsy ho antsika ihany, fa natao koa ho an'izao tontolo izao » (1 Jaona 2,2).
Ankehitriny dia ny halaliny: "Satria fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika: na dia nanan-karena aza izy, dia nanjary nahantra ho anao, mba hanan-karena amin'ny fahantrany" (2 Korintiana 8,9).
Manao ahoana ny haavon'ny fitiavana izany? "Fa Andriamanitra, Izay manankarena amin'ny famindram-po, amin'ny fitiavany lehibe, dia Izy no nanao antsika izay maty tamin'ny ota velona niaraka tamin'i Kristy - tamin'ny fahasoavana dia vonjena ianareo; ary natsangany ho antsika Izy ary napetrany tany an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy » (Efesiana 2,4: 6).
Io no fahalalahan-tanana mahatalanjona ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra ary feno ny herin'io fitiavana io izay miaina amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika ary azontsika atao daholo ny manilika ny fetra ananantsika: "Saingy raha mandresy lavitra antsika izay rehetra tia antsika" (Romana 8,37).
Tianao be ny ahafantaranao hoe inona ny dingana homena anao hanaraka an'i Jesoa!